Zavatra maimaim-poana hatao arisiva - IntoKildare
Zavatra maimaim-poana hatao
Tsy handoa na inona na inona ianao hitsidihana ny maro amin'ireo manintona an'i Kildare. Malalaka ny hiditra ny maro amin'izy ireo, ary misy fisehoan-javatra sy traikefa maimaimpoana mba hankafizanao koa. Mikaroha trano mimanda, tranombakoka, galeria zavakanto sy maro hafa, maimaim-poana, amin'ny andro iray tsy hamelana anao any am-paosy. Antsika io!
Topazo maso ireo manintona olona maimaimpoana be mpitsidika indrindra an'i Kildare, hahitanao zavatra maromaro hatao nefa tsy manapotika ny banky. Manomboka amin'ny tranokala lova, hatrany amin'ny toeram-piompiana biby, ny tahiry voajanahary ary ny tranombakoka lamaody, dia azo antoka fa hisy zavatra ho an'ny rehetra.